KAABASHKA PEKING FOR GASTRITIS: MIYUU SUURTAGAL YAHAY IN LA CUNO AT ACIDITY AMA HOOSEEYA, QAAB NOO FOOMKA SI AY U CUNAAN IYO WAXA SUXUUNTA SI LOO KARIYO? - BEER CAGAARAN
Kaabashka Beijing waxaa ku jira xaddi badan oo fiitamiin ah, walxaha raadraaca, fiber. Tani waa badeecad aad u muhiim ah oo waxtar leh, waxaa loo isticmaalaa hababka awoodda kala duwan. Taasi waa sababta ay caan u tahay. Hase yeeshe qof kasta oo aan had iyo jeer la muujin marka uu jiro cuduro (tusaale ahaan, caloosha iyo mindhicirka - gastritis-ka, boogaha).
Shiinaha iyo Japan, kaabajka Beijing (sababtoo ah joogitaanka lysine, aamiin amino ah oo kor u qaadaya difaaca oo u adeegta si loo nadiifiyo dhiigga) waxaa loo tixgeliyaa arrin dheer. Waxaa loo adeegsadaa gastritis (bacriminta sare iyo kuwa hooseeya), boogaha boogaha, madax xanuun iyo macaan, cudurada atherosclerosis iyo hypertension.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay khudradda iyo saameynta ay ku leeyihiin bani-aadamka inta lagu jiro cuncunka xajmiga caloosha
Waa shey aan lagama maarmaan u ah cuntooyinka keena jidhkeena leh macdan iyo fitamiino leh isticmaalka dheeraadka ah, oo leh biyo iyo borotiin, dufan iyo carbohydrates.
Saameynayaa xaddiga fitamiinada:
Vitamiin ee kooxda B (B1, B2, B4 - qoob-ka-ciyaarka, B5, B6).
Calories - 13 kcal halkii 100 g
Tixgelinta taas Gastritis waa xanuujinta xuubka xabka ee caloosha iyo duodenum., isticmaalka kaabajka cusub ee cudurka this (sababtoo ah joogitaanka of citric acid) waa aan loo baahnayn. Qabashada cunto karinta - mid ka mid ah hababka cunto qaadashada ee khudraddaas.
Quenching, additive ee suxuunta kala duwan, isticmaalka la isku daray khudaarta kale - hababka ugu muhiimsan ee cunto-ku-daweynta ka soo kaabash Chinese.
Digniin! Mid ka mid ah tayada ee kaabashan waa awood u lahaanshaha fitamiinada muddo dheer (jiilaalka, guga), taas oo u keenta meesha ugu horeysa ee dhammaan khudaarta kale.
Miyaa suurtogal ah in la cuno cudurkan?
Ma aha oo kaliya suurtagal, laakiin waa lagama maarmaan Cudur kasta oo bani'aadam ah, qaadashada cuntooyinka hodanka ku ah fiitamiinada iyo mareellada waa suurad wacan.. Gaar ahaan guga iyo jiilaalka. Dhammaan waxyaalaha muhiimka ah ee ku jira kaabajka, inta ka hartay mudo dheer. Intaa waxaa dheer, maamulka nidaamsan wuxuu leeyahay saameyn togan oo ku saabsan bogsashada nabarka.
Diyaargarow waa cunto karis ka samaysan kaabajka, adoo isticmaalaya karinta, iyo tixgelinta nooca xanuujinta (korodhka ama hoos udhaca). Tan waxay ku xiran tahay isticmaalka kaabash.
Tan iyo wakhtiyadii hore, dadku waxay u adeegsadeen caabuq ka mid ah mareenka caloosha iyo mindhicirta cusub ee la jarjaray ee cabitaanka kaabajka ah sida gargaarka kowaad ee xanuunka. Maanta, daawadu sidoo kale kama saarto saameynta saameynta wanaagsan ee casiirka ee caloosha. Wuxuu u shaqeeyaa sidii wax lagu xoqdo, isagoo ka jaraya barar. Kani waa gargaar mudo gaaban ah oo lagu yareeyo calaamadaha xanuunka caloosha (lallabbo, miyir-beeleed).
Isticmaalida noocyo kala duwan oo ah kiimiko
Iyada oo aysiidhka kordhaya ee gastritis waxaa si adag loo mamnuucay in la isticmaalo caleemaha kaabajka cusub iyo walxo kasta oo la isku daray alaabooyinka kale. Citric acid waxaa ku jira caleemo cusub., iyo leh acidity kordhaya ee caloosha waxaa jira had iyo jeer ka badan oo ah hydrochloric acid. Isku dhafka ayaa keenaya geedi socodka nabarka, xummad iyo xanuun xoog leh.
In gastritis leh aysidhka hooseeya, cuntada waa la qoyay si liidata, istaagay, halsano bilaabmaa. Suxuunta laga soo bilaabo Khamriga Beijing aad bay faa'iido u leedahay. Joogitaanka aaladda citric ee kaabajka waxay ka caawisaa in la dedejiyo dheefshiidka.
Kaabashka caadiga ah ee Kaabashka Peking wuxuu saameyn wanaagsan ku yeeshay bogsashada, wuxuu caawiyaa iyo kordhiyaa tallaabada daawooyinka aasaasiga ah inta lagu jiro daweynta.
Foomkee ayaa loo ogol yahay inuu wax cuno?
Iyadoo ay ku xiran tahay heerka cudurka iyo nooca xanuunka caloosha, qaadashada kaabajka iyo cuntooyinka cuntada waa ka duwan yahay.
Karinta waa loo baahan yahay, oo ay ku xigto adoo isku darka cuntooyinka iyo khudaarta kala duwan (oo leh astaamaha kordhaya ee caloosha).
Ku dar saladh iyo saxamada kale ee caleemaha cusub (oo leh aalado hooseeya).
Isticmaalka casiir cusub oo la jarjaray oo leh aalado hooseeya sida ambalansi oo loogu talagalay quruxda (si kooban).
Rabshadaha leh subacid yar yar
Kaabashka ka baxo 200 g
Karootada 250 g
Hal gacan oo caano ah.
Saliid saytuun ah (qaado qaado).
Ku dhaq caleemaha kaabajka iyo jarjar.
Apple iyo maydhashada dabacasaha, weelka.
U kori sabiibta biyo karkaraya, hayso ilaa inta jilicsan, soo saar oo qalalan.
Isku qas wax kasta oo lagu kariyey saxan qoto dheer.
Xilliga saliidda sayniska ah.
Kaabashka Peking ka baxo.
Laab of 250 g (la kariyey).
Baradho la karkariyey 2 pcs.
Ukunta adag oo la kariyey.
Tufaaxu waa dhexdhexaad.
Karootada la karkariyey 1 pc.
Digir cagaaran 1 koob.
Kiriimka labeen leh dufanka yar yar 3 tbsp. l
Iska yaree xabadaha la karkariyey.
Baradho la kariyey iyo karootada jarjar xabadaha yaryar.
My iyo si yaryar u jar caleemo kaabajka.
Si yaryar u yar ukunta. Apple nadiif ah iyo jarjar xabadaha.
Maydhin digir cagaaran adoo isku dardaraya maaddooyinka.
Kariimka dhanaanku wuu dhadhamiyaa.
Rabshadaha udub dhexaadka ah
Kaabashka 350 g
Karootada 1 pc.
Sare 1 pc.
Tamaandho yaanyo 2 tbsp. l
Saliid gabbaldayaha 5 tbsp. l
Cuntadayda iyo kaabajka.
Iska yaree basasha si yaryar.
Iska dhaaf saliidda digsi kuleyl dhexdhexaad ah.
Ku dar kalluunka iyo basasha, walaaq oo isku kari ilaa 10 daqiiqadood.
Fry khudradda jarjaran ee subagga 3-4 daqiiqo.
Karkari karootada ka daadi, ku rid Kaabashka iyo fuudka 7 daqiiqo dheeraad ah.
Ku dar jajab yaanyo, isku kari ilaa 1 daqiiqo.
Meelo boqoshaada la shiilay, isku dar.
Faafi saxan, kula saydhaa caws udgoon.
Xirmooyinka naasaha ee Turkiga
Naaska nuuganka turkey 600 g.
Bariis 100 gr.
Kaabashka 250 gr.
Saliida gabbaldayaha (hadhuudh) 2 tbsp. l
Bacaha yaanyo 70 g
Greens (dhir, dill) 3 laamo kasta.
Basbaaska madow inay dhadhamiso.
Samaynta doolsho qasacadaysan.
Bariis karkar 15 daqiiqo, ku soo celi suunka.
Caleemaha Kaabashka ku shub biyo karkaraya 3 daqiiqo.
Kuug bariiska bariiska hilibka duqadda leh, milix, basbaas iyo ku duub hilibka duqadda ah ee caleemaha, duuduubka kaabajka ah si adag u duub caleen.
Buuxi xirmooyinka kaabajka leh isku dar ah oo ah kareem yar oo labeen dhanaan iyo jinka yaanyo iyo ku rid foornada.
Dubo 25 daqiiqo. Heerkulka 180 digrii.
Daadi cagaarka jarjaran ka hor intaadan u adeegin.
Khatar ka imaan karta xadgudub khudradeed
Isticmaalka joogtada ah ee kaabajka ah, qadar badan oo fiber ayaa u galaya caloosha, taas oo xannibaysa darbiyada caloosha iyo caloosha. Ciladahan:
matag macquul ah.
Ha cunin kaabajar leh acetic, malic, citric iyo acids kale. Waxyaabaha khatarta leh, qadar badan oo milix ah, alaabo kale oo xanaaq badan.
Looma baahna kaabajka dhadhanka lagu qasi karo walxo bur ah (bur saliidda, noocyada kala duwan ee pies, iwm.).
Kaabashka Sauerkraut waa mid aan ku haboonayn khamriga.
Waa muhiim! Isticmaalka casiirka kaabajka ah ee tiro badan inta lagu jiro gawracatada oo leh aalado hooseeya, waxay abuurtaa gaas caloosha. Haddii uu jiro calool adag, waxaad u baahan tahay inaad qaadato daryeel weyn.
Kaabashka Beijing waa dukaanka fitamiinada iyo walxaha loo baahan yahay ee loo baahan yahay shaqada caadiga ah ee jirka bini'aadamka. Waxay faa'iido u leedahay dadka caafimaadka qaba, iyo kuwa qaba cudurrada qaarkood. Codsiga xaddidaad macquul ah waxay ka caawisaa jirku inuu dhakhso u bogsado, wuxuu kordhiyaa saameynta wanaagsan ee daroogooyinka lagama maarmaanka ah.